The First Application uye Promotion Centre Metal Zvinhu chirungiso Manufacturing muna Hunan Kuri pamutemo Chigaro - Vday chirungiso Manufacturing Technology Co., Ltd.
nguva: 2018-12-13 Hits:
On December 13, 2018, 3D Printing Industry Technology Innovation Strategic Alliance muna Changsha(pashure kunzi 3D Strategic Alliance) paakavapa VTECH sezvo Application uye Promotion Centre Metal Zvinhu chirungiso Manufacturing, iyo Kunoratidza pamutemo pakagadzwa wokutanga Application uye Promotion Centre Metal Zvinhu chirungiso Manufacturing muna Hunan Province.
The awarding mhemberero inokosha zvakarongwa rokusangana kuti 3D Printing Industry Technology Innovation Strategic Alliance nemasaini Ceremony uye okuchembera Conference nokuda Hunan College of Information School-zvebhizimisi Cooperation zuro.
Musangano wakayambirwa naMwari chirungiso cheni hofisi kugadzira indasitiri, uye music sezvo rwokugadzirwa utsanzi uye kukunda zvisamumirira mushandirapamwe. The vaibva kumayunivhesiti akawanda, zvedzidzo masangano, Songaniro uye mabhizimisi vakaunganidza, kupanana uye kudzidza 3D kudhindwa michina.
Chimwe womumhuri musangano uyu Hurukuro inokosha kutaura musi 3D kudhindwa Michina kushanda. Mutungamiri Our Mr. Wang akapa mashoko okutanga——The usanyanyoratidza Zvinodiwa uye Innovation Driving nokuda Metal 3D Printing kuna New Materials Technology, kusanganisira simbi 3D pakudhinda, muganhu zvinodiwa, VTECH’ That rwokugadzirwa utsanzi uye chigadzirwa nezvazviVTECHsira, VTECH’ S kukura uye ramangwana. Vatori All akamuka achinyatsoziva simbi 3D yokudhinda upfu zvinhu.
Metal upfu zvinhu ndiyo mujinga inokosha yokuva simbi 3D pakudhinda michina. The sate okukura, kune pamwero mukuru, anosarudza kukura zvesimbi chirungiso kugadzira indasitiri. saka, pane muganhu zvinodiwa kuti waivako indekisi nesimbi upfu nezvinhu dzakakwirira: yakakwirira kuchena, yakaderera kumwedzi gutsikana, yakakwirira sphericity, mukuru chiputiriso arambe achirema uye yakakwirira kuerera zvivako.
Sezvo mukuru chairema 3D Strategic Alliance, isu VTECH, zvedu hwokugadzira kuwanda uye kuramba utsanzi mu upfu simbi mumunda, nguva dzose innovates uye researches dzose nguva, kushandisa kugadzira micro & Nano akangwara simbi Nezvakakuyiwa zvinhu pamwe makasitoma’ zvakanaka zvaunofunga. rubatsiro All uye kuzivikanwa munzira ndivo VTECH’ That uchityaira simba!
Sezvo Application uye Promotion Centre Metal Zvinhu chirungiso Manufacturing, VTECH acharamba vanoomerera pakutenda zvakangwara kugadzira yemberi huru, tsvaka micro & Nano akangwara simbi zvinhu mhinduro uye tarisiro kuti kukura VTECH sezvo yakakwana uye zvikuru nyanzvi fekitari munyika. Uye VTECH kuchawedzera kundikurudzira uye kutamba vaitungamirira uye kutsigira basa zvechokwadi!
KUMASHUREVTECH muna TCT Asia
NEXTWelcome Farsoon Technologies 'Second Visit